हिम्मत भए पुर्वराजालाई नागार्जुनबाट लखेट्ने मात्र होइन,जेल हालेर देखाऊ ! – Himalitimes
हिम्मत भए पुर्वराजालाई नागार्जुनबाट लखेट्ने मात्र होइन,जेल हालेर देखाऊ !
२०७६ श्रावण २० २०:४३ मा प्रकाशित
आरोपलाई पुष्टी गर्न नपर्ने ठाउँ नै राजनीति हो । हो नेपाली राजनीतिमा त्यस्तै हुने गरेको छ । चाहे त्यो हाईप्रोफाइल बिचको आरोप प्रत्यारोप होस् ,चाहे तल्लो तहमा देखिने आरोप प्रत्यारोप होस् । यहाँ आरोपलाई पुष्टि गर्नु नपर्ने भएरै होला हाम्रा हाइप्रोफाइल नेताहरु नै निकै तल्लो स्तरमा झरेर एकले अर्कोलाई गालीगलौच गर्ने आरोप प्रत्यारोपमा उत्रने गरेको हामी विगत लामो समयदेखि सुन्दै र देख्दै आएका छौँ ।
नेपाली राजनीतिमा विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम,कालखण्ड (२००७ सालदेखि ६२/६३) सम्म आइपुग्दा धेरै व्यवस्था परिवर्तन भए धेरै संविधान बने ।,तर वास्तवमा नेपाली जनताले अनुभूति गर्ने गरी कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था,ले काम गर्न सकिरहेको छैन। सकोस् पनि कसरी व्यवस्था परिवर्तनका हिमायतीहरु कै आपसी लडाइले नेपाली उखान टुक्कामा भनेझैँ साँढेको जुधाई बाच्छाको मिचाई भएको कुरा यथार्थ हो । अनि जनताले यस्ताबाट के आशा गर्ने र के पाउने ? जुन आफ्नाे स्वार्थकै निमित्त लडिरहन्छन ।
विशेषतः नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन संविधान सभाको चुनाव, संविधान निर्माण र कार्यान्वयनसम्म आइपुग्दा पनि समस्याहरु करिबकरिब उस्तै उस्तै देखिन्छन् । वर्गीय समस्याको समाधान हुनुको साटो झन्झन बढेको देखिन्छ।
नेपाली राजनीतिमा १० वर्षे जनयुद्ध, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले नै नेपाललाई गणतान्त्रिक मुलुकको रुपमा चित्रण गर्यो । त्यसभन्दा पहिले नेपालमा २४० वर्ष लामो इतिहास बोकेको राजसंस्था थियो । जसको अन्तिम राजाको रुपमा राजा ज्ञानेन्द्र हुन पुगे । उनकै शासनकालमा नेपालमा राजतन्त्रको इतिहास अन्तिम बन्न पुग्यो । तिनै राजा ज्ञानेन्द्रमाथि दरबार हत्याकाण्ड गरी आफै राजा बनेको आरोप पनि लाग्यो।
आम मानिसमा पनि यो खालको भ्रम सृजित गरियो । तर उक्त कुराको पुष्टि आजका दिनसम्म हुन सकेको छैन ।
दरबार हत्याकाण्ड ज्ञानेन्द्रले नै गरेको हो भन्ने यो भ्रमको खेती आम सर्वसाधारणबाट नभई बडो षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट शीर्ष तहबाटै गरिएको थियो । सम्झना गराउन चाहन्छु, नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन सहमतिपछि मात्र गणतन्त्र नेपालमा परिवर्तन भयो । त्यतिबेला राजा थिएँ । अन्जानमै ७ वर्षको बालक अवस्थामा राजा बनेका र पछि गएर बाध्यात्मक परिस्थितिमा दुःखकै बिचमा राजा बन्न पुगेका ज्ञानेन्द्र शाह । बाध्यात्मक परिस्थिति र ठूलो आरोपको बिचबाट प्राप्त भएको श्रीपेचलाई जनताकै चाहना हो भने जनताको नासो जनताकै बीचमा छोडीदिन्छु भनि निडरताका साथ हाँसीहाँसी नागरिकको रुपमा बाहिरिएको कुरा प्रष्टै छ ।
तर आज आएर सुन्ने गरेको छु, हाँसीहाँसी नागरिक बन्न तयार भएका तिनै राजा (नागरिककै हैसियतमा रहेका) ज्ञानेन्द्रलाई हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ भन्ने कुरा नारायणहिटी बाट लखेट्नुपर्छ भन्ने कुरा, होईन यो कस्तो गणतन्त्र हो ? जो नागरिक स्वतन्त्र रुपमा हिँडडुल गर्न समेत पाउँदैनन् । पारिवारिक जमघटमा नाँच्न समेत पाउँदैनन्, सार्वजनिक रुपमा बोल्न समेत पाउँदैनन् ।
एउटा नागरिकको व्यक्तिगत जीवनसँग गणतन्त्रको किन यति धेरै चासो देखाउन पुगेको होला । ज्ञानेन्द्र हाँस्दा हल्लिने गणतन्त्र, ज्ञानेन्द्र नाँच्दा हल्लिने गणतन्त्र, ज्ञानेन्द्र घुम्दा डगमगाउने गणतन्त्र, यो कस्तो गणतन्त्र, गणतन्त्र त जनहितमा जारी हुनुपर्ने हो तर यो त चोर हितमा जारी गणतन्त्र जस्तो देखियो । त्यसैले त होला खुकुरी निकाल्दा चोरले खुट्टा ताने जस्तै ज्ञानेन्द्र हिँड्दा आत्तिनु पर्ने किन ? यो कस्तो गणतन्त्र हो । जुन एकजना नागरिकले गर्ने यस्ता कार्य कुराको पछि लाग्नुपर्ने, गणतन्त्रमा त सर्वसाधारणको आवाज बुलन्द हुनुपर्ने । उनीहरुका आवश्यक प्रश्नहरुप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो ।
गणतन्त्रमा त झन झुठ्ठा आरोप लगाउनेहरुलाई पनि आरोप पुष्टि नभएको खण्डमा कानुन अनुसारको सजाय हुनुपर्ने हो तर त्यसको ठीक विपरित भैराखेको छ । त्यो पनि तपाईं हामी सर्वसाधारणबाट होईन, एउटा मात्र उदाहरण दिन चाहन्छु कि पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सार्वजनिक कार्यक्रममै एउटा आरोप लगाए । प्रचण्डले २२ अर्ब घोटाला गरेको कारण पार्टी छोडेको हु । जसको सन्दर्भमा सामान्य छानविन समेत हुन सकेन ।
गणतन्त्रले यस्तै छाडा बोल्नलाई वाक स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको हो । त्यसैे सुरुमै भनेको छु, यहाँ कुनै पनि कोही कसैलाई लगाउने आरोपको पुष्टि हुनु पर्दैन ।, होईन भने एउटालाई त कारवाही हुनु पर्योनि ? विडम्बना यहाँ यस्ता धेरै घटनाहरू छन ।
राजदरवार हत्याकाण्डपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र हालका पूर्व राजा भैसकेका ज्ञानेन्द्रमाथि त्यतिबेलादेखि कहिँकतै अहिलेसम्म लाग्दै आएको आरोपलाई पुष्टि गर्न वा निर्दोष सावित गर्ने जिम्मा के गणतन्त्रको हुनुपर्ने होईन ? मदन भण्डारी काण्डको जवाफ गणतन्त्रले दिनुपर्ने होईन ? गणतन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो भने जनताले सबैभन्दा जान्न चाहेका कुरा मध्य यि पनि हुन् । अझै पनि जनतालाई अन्धकार ,अन्यौल, भ्रममा राखेर शासन गर्ने हो भने तपाइहरुले राजालाई नागार्जुनबाट धपाउने, लखेट्ने होइन, जनताले तपाइहरुलाई देशबाटै (धपाउने,लखेट्ने ) देश निकाला गर्ने दिन आउन सक्छ ।
गणतन्त्रको आवरणमा राष्ट्रियतालाई खोक्रो पार्नेहरु गणतन्त्रको नाममा लुट मच्चाउनेहरु, गणतन्त्रको नाममा अशान्ति फैलाउनेहरु आज ज्ञानेन्द्र सुतेर उठ्दा पनि तर्सिने गरेका छन् । उठेर हिँड्दा पनि तर्सिने गरेका छन् । नाँच्दा पनि तर्सिने गरेका छन् । हाँस्दा पनि तर्सिने गरेका छन् । होईन भने किन तिमीहरुलाई मनको बाघले खाइरहेको छ । सक्छौ भने ज्ञानेन्द्र राजालाई नागार्जुनबाट लखेट्ने होईन देश निकाला नै गर, तिमीहरुले लगाएको आरोप छरेको भ्रमणलाई पुष्टि गर्दै बरु जेल हालेर देखाऊ !!
पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहद्वारा पशुपतिमा दर्शन,छोरी पूर्णिका र छोरा हृदयन्द्र पनि साथमै
पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य वृद्धि, ग्यासको मूल्य घट्यो !